China ezilahlwayo uxande Grill wocingo mveliso kunye nabenzi | Isinyithi seJinqu
Ezilahlwayo Grill umnatha ikwabizwa ngokuba kugqunywe umda wokugcoba umnatha, onokuthintela ukwenzeka kwemikrwelo yesandla.
Sasizikhethele ngokukhethekileyo kwi-Barbecue grill yokuvelisa kunye nokuthumela ngaphandle ukusukela ngonyaka wama-2005. Iziphumo zemihla ngemihla ziziziqwenga ezingama-300,000. Inkampani yethu ibingomnye wabathengisi abaphezulu be-BBQ mesh e-Anping County, iphi idolophu yocingo.
Umda ogqunyiweyo wegrill grill unokuthintela ukwenzeka kwemikrwelo yesandla. Ezilahlwayo Grill umnatha akukho mfuneko yokuba uhlambe. Yonga iindleko zomsebenzi. Kukhetho lwezoqoqosho. Zintathu iindidi: Uhlobo lweFlat, uhlobo lwe-convex kunye nohlobo lweArc.
Ukulungela ukupheka inyama yenyama, intlanzi, i-shrimp, i-prawns, imifuno, iitumato, ii-pizza kunye nokunye ukutya.
Igcina ukutya kwakho kwi-grill apho kufanelekileyo kwaye ingawi phantsi phakathi kweegrates kwaye ivumela ukutya okucoliweyo ngokulinganayo ngalo lonke ixesha!
Yenza isidlo sangokuhlwa esinobunewunewu esiya kuthi sibonise abamelwane bakho ngokutya okugreyidiweyo okunesichengeni esipheleleyo kumsi nakubushushu kwi-grill yakho.
Umnatha wegrill yesikwere
Ubungakanani 220 * 220mm, 225 * 225mm, 240 * 240mm, 250 * 250mm, 270 * 270mm, 280 * 280mm, 300 * 300mm
Uxande Grill umnatha
Ubungakanani 155 * 215mm, 167 * 216mm, 170 * 305mm, 170 * 330mm, 170 * 392mm, 180 * 280mm, 198 * 337mm, 200 * 300mm200 * 330mm, 210 * 270mm,
240 * 300mm, 250 * 450mm, 260 * 390mm, 275 * 175mm, 300 * 400mm,
300 * 450mm, 350 * 450mm, 450 * 185mm, 430 * 340mm, 560 * 410mm
Iminqweno yethu yaphakade sisimo sengqondo "sokujonga imarike, jonga isiko, jonga isayensi" kunye nethiyori "yomgangatho osisiseko, kholelwa kwi-1 kunye nolawulo lwangaphambili" kwiFektri ngokuthe ngqo inikezela ngeBhabhathi yeChina Isinyithi esineNsimbi engenacici I-Mesh yeJapan / Korea, ukuba iyafuneka, wamkelekile ukuba unxibelelane nathi kwiphepha lethu lewebhu okanye ngokubonisana ngefowuni, siya kukuvuyela ukukukhonza.
Umzi-mveliso unikezela ngokuthe ngqo i-China BBQ, Isixhobo seGridi ye-BBQ Mesh, Umnqophiso wethu kukuhambisa ixabiso eliphakamileyo ngokugqibeleleyo kubathengi bethu nakubathengi babo. Oku kuzibophelela kugcwele kuyo yonke into esiyenzayo, kusiqhubela ekubeni siqhubeke nokuphucula izisombululo zethu kunye neenkqubo zokufezekisa iimfuno zakho.
Sisebenza ngokukodwa kwimveliso yocingo kunye nokuthumela ngaphandle. Amalahle amalahle egrill yenye yeemveliso zethu eziphambili.
Ezilahlwayo i-barbecue grill mesh zamkelwe kakhulu kwimarike yaseJapan, Korea, Malaysia, Singapore, Australia njalo njalo.
Imveliso ye-BBQ ye-grill yemveliso yemihla ngemihla ngamaqhekeza angama-300,000. Uku-odolwa rhoqo eJapan zizikhongozeli ezili-12 ngenyanga.
Sinawo amandla okukubonelela ngomgangatho ophezulu wocingo lwe-BBQ wocingo kunye nexabiso lefektri kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo.
Egqithileyo Ujikeleze igrill wocingo
Okulandelayo: Ixabiso eliphantsi legrill
Banokubulawa Grill enemingxuma
Banokubulawa Grill Net
Korea Banokubulawa enemingxuma
inkampu yangaphandle yegrill mesh